IDOLOPHU KA-AARON RODGERS YASECHICO YIGREEN BAY WEST-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Idolophu ka-Aaron Rodgers yaseChico yiGreen Bay West
CHICO - UAaron Rodgers wayeyimodeli yenkulisa, ngaphandle komkhwa okhethekileyo. Wayehlala ezoba le mijikelezo emincinci kunye ne-X kunye nemigca ngokulindela ukuphumla, utshilo u-Bette Lawler - kwaye u-Lawler wenza inqaku lokuxelela uDarla Rodgers kwinkomfa yabo yokuqala yabazali notitshala.
Ndamxelela ukuba uAron wayenobubele kuye wonke umntu kwaye eziphethe kakuhle, uLawler ukhumbule kule veki. Kodwa bendifuna ukuba azi ukuba lingakanani ixesha alichithe ezoba imidlalo yebhola ekhatywayo.
ULawler wahleka kwinkumbulo. NgeCawa, uRodgers uya kukhokela iGreen Bay Packers ngokuchasene nePittsburgh Steelers kwiSuper Bowl XLV.
Ngembeko yonyana wakhe wokuzalwa, uChico ujijelwe ngohlaza-negolide. Ikota yePackers yakhulela apha, yaya kwisikolo samabanga aphakamileyo nakwikholeji encinci apha, kwaye abazali bakhe, uEd noDarla, basahlala edolophini.
Kusenokubakho abalandeli be-Steelers kwenye indawo phakathi kwabemi abangama-87,713. Kodwa ukuba kukho, bathe cwaka ngoku, utshilo uJolene Francis, umongameli weCandelo lezoRhwebo.
IChico ngequbuliso yeyona ndawo itshiziyo kweli cala leWisconsin. Umthengisi wasekuhlaleni weVolkswagen watyabeka iiplakhadi zeGo Aaron kwiBeetle embala wecheddar. Kude kufuphi nalapho, kwiHorse Store nakwaMore, kukho umfanekiso wehashe onxibe ijezi yePackers kwaye ugqitywe nge-jaunty cheesehead.
Ungacinga ukuba siphakathi kweWisconsin, utshilo uCydney Estabrook, umhlali waseChico ixesha elide.
Kwiveki ephelileyo, iinkokeli zoluntu ziye zadibana kwintlanganiso yoBume beSixeko, umcimbi osoloko unzima, ngamanye amaxesha uxabana. Kodwa ngaphambi kokuba ingxoxo iqalise, uFrancis, umongameli weCandelo lezoRhwebo, waphakama waza wacela isihlwele ukuba sithathe ixesha lokucamngca ngezinto ezisidibanisayo sonke.
Abantu bamjonga bengajonganga, mhlawumbi becinga ukuba uFrancis wayeza kubakhokela ngomthandazo. Endaweni yoko, uFrancis waqala ukuphinda, Hamba, Pakisha, hamba! de wonke umntu osegumbini wavuma ingoma.
Enye ivenkile yasekuhlaleni yezinto zemidlalo yasasaza izikipa ezikhethekileyo ezili-1 000. Ngaphambili: Hamba, Pakisha. Ngasemva: igama le-alma maters yasekhaya kaRodgers, iPleasant Valley High kunye neKholeji yoLuntu yaseButte.
Iihempe zaba yinto eshushu kangangokuba isikhululo sikamabonwakude sasekhaya sabika ukuba enye imithwalo yayiza kufuneka kusasa ngoLwesithathu. Ngexesha leMidlalo yeQela ivula iingcango zayo nge-9: 30 kusasa, abalandeli babelinde iiyure. Iihempe zaziphelile kwimizuzu esixhenxe.
Ewe, idolophu iyangxola. Ndicinga ukuba kuyamangalisa, utshilo uJeff Stover, owayesakuba ngumdlali we-49ers okhuselayo ophumelele amakhonkco amabini e-Super Bowl kwaye ngoku ungumnini weChico Sports Club. (Intombi kaStover, uStefanie, yayikhe yangumhla kaRodgers ukuya kwiPleasant Valley High prom.)
URodgers, naye, wenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela indawo yeSuper Bowl ebuyela kwidolophu yakowabo, ngokuyinxenye kuba umhlaba webhola ekhatywayo wawubonakala ungamazi uChico xa wayekhula. Kwakugqalwa njengendawo engaphandle efihlakeleyo kangangokuba abaqeshwa beekholeji babengafane bahambe umgama oziikhilomitha ezingama-90 kumntla-mpuma weSacramento ukuya kukhangela italente.
Yiloo ndlela uRodgers, i-quarterback ye-Super Bowl ogama lakhe liphumelele i-98.4 lilelona libalaseleyo kwimbali ye-NFL, ufumene i-zero Division I scholarship inikezela esikolweni esiphakeme.
Endaweni yoko, uRodgers waqalisa umsebenzi wakhe kwiKholeji yaseButte e-Oroville, malunga neekhilomitha ezili-11 kumzantsi weChico. Hleze nabani na ayilibale loo mbali, uRodgers wayenxibe isikipa seKholeji yaseButte kwinkomfa yakhe yeendaba emva komdlalo weNFC wobuntshatsheli.
Kamva ngobo busuku, wathumela umyalezo kumqeqeshi wakhe omdala. Uyibonile lonto? Oko bekukwenzela wena.
UCraig Rigsbee akazange abone kuphela, wayekhe wayibona ngaphambili. Ukuxhonywa eludongeni lwegumbi lokuphumla laseRigsbee yifoto eqingqiweyo yeMidlalo kaRodgers. Kuyabonakala ukuba, xa umfoti we-SI exelele uRodgers ukuba enze ngokwendalo, ikota yatshintsha yaba yihempe yeKholeji yaseButte.
Ngobulungisa kubaqeshwa bexesha elikhulu abamthiyileyo, kufanele kuqatshelwe ukuba uRodgers wayeyintyatyambo kade. UJohn Shepherd, inqununu ePleasant Valley High, unomfanekiso e-ofisini yakhe kaRodgers njengomdlali webhola yomnyazi osandul' ukutshata. Umntwana wayeyi-5-foot-2, 130 pounds kwaye wayenxibe ubungakanani-14 izihlangu.
Wayezindlebe kunye neenyawo zonke, u-Shepherd oqhekekileyo, owayeqeqesha elo qela.
URodgers wayenayo yonke enye into, nangona kunjalo: ukuchaneka, i-moxie kunye neenyawo ezinqabileyo azizuze njengelifa kunina, umdanisi okwinqwelomoya ephezulu. Ngexesha uRodgers enyathela ebaleni e-Butte, ifreyim yakhe eseleyo yahambelana nezi zihlangu zobukhulu-14.
Wayekhule ukuya malunga neepounds ezingama-200, kwaye olo suku lokuqala lokuziqhelanisa, yayilelona xesha lokwenyani, uRigsbee wakhumbula. UAaron wabaleka ekunene, watyala waza waphosa malunga neemitha ezingama-50 kwidime ukuya ngasekhohlo.
Ndajonga kumququzeleli wam okhubekisayo, kwaye sasuka nje, 'Wow. Ivela phi loo nto?’
URodgers uye wakhokelela uButte kwirekhodi le-10-1. Kwilahleko yakhe ekuphela kwayo, kwiKholeji yesiXeko saseFresno, umva wekota wayenerekhodi lesikolo leeyadi ezingama-468 zetyala elipheleleyo. Ndiyakuxelela ukuba ndiphefumlele phezulu xa ndeva uAaron Rodgers ehamba emva konyaka omnye, ukhumbula umqeqeshi weFresno uTony Caviglia.
Ukuza kuthi ga ngoku, yonke i-saga kaRodgers ivakala iyintsomi: Umqeqeshi weCal uJeff Tedford wayehlola ifilimu yomdlalo we-Butte eqinile uGarrett Cross xa wakhubeka kumdlalo wekota emva kokukhululwa ngokukhawuleza, isakhelo esomeleleyo kunye nokuzola kwangaphambi kwendalo. UTedford wakhawuleza wehla nge-State Route 99 ukuya kuziqhelanisa neKholeji yase-Butte.
Weza ngoMvulo kwaye wamjonga ephosa malunga nemizuzu engama-25, uRigsbee wakhumbula. Waphendukela kum wathi, 'Le yeyona nto ingcono kakhulu kwikholeji yekholeji ye-quarterback endakha ndayibona, kwaye uya kuba ngumdlali we-NFL ngenye imini.'
URigsbee wamangaliswa. Ucinga njalo? wabuza.
Hayi, waphendula uTedford. Ndiyazi njalo.
UTedford wanikezela ngekota i-scholarship kwangoko. Kwaye ingqikelelo yakhe ye-NFL ibonakala inqabile xa ubuyela emva. Ukusukela oko uRodgers waba ngumqali wePackers ngo-2008, nguDrew Brees kuphela, uPeyton Manning kunye noPhilip Rivers abaneeyadi ezidlulayo.
Ndingatsho ukuba ungoyena mdlali ubalaseleyo kwi-NFL, utshilo uTedford kule veki. Uno (Tom) uBrady, uneManning, uneBrees - zininzi iikota ezinkulu. Kodwa uthatha isakhono sakhe sokubaleka kunye nobuchule bokwenza imidlalo, izinto azenzayo ziphuma kuxinzelelo kwaye enze izinto zenzeke, kunye nokuphoswa kwexesha lokuphoswa kunye nokwenziwa kwezigqibo-ndiya kumthatha kuye nawuphi na omnye umntu ngoku. khokela iqela lam.
Ngoku, ngenxa yokuvela kukaRodgers, abaqeshwa beekholeji babetha indlela enqatyisiweyo kwigadi yeziqhamo zealmond.
Andikwazi ukukuxelela ukuba bangaphi abaqeshwa abaye baphuma esikolweni bam bathi, 'Kufuneka siye eChico kuba, dammit, simkhumbule laa mntwana kaRodgers kwaye ngoku umqeqeshi wethu usikhaba (ngasemva) ukuba siphume apha kwaye. ungaphoswa kwakhona, ”utshilo uRigsbee.
NjengoRodgers ngokwakhe, idolophu iyaxhathisa umnqweno wokugcoba. U-Rodgers akazange akhononde malunga ne-49ers emchitha nge-No.
UStover, owayesakuba ngumdlali we-49ers, wabona utshintsho olubi lweqela lakhe ukusuka eJoe Montana ukuya kuSteve Young kwaye uyazi ukuba imeko ibinokutsha kangakanani. U-Aaron wajinga apho, kwaye lakufika ixesha lakhe, wenza into awayefanele ukuyenza ukubonisa abalandeli, kuye wonke umntu, ukuba unokuba ngumdlali wekota, watsho. Ukubasa kwiSuper Bowl kubeka isikhuzo esihle kuyo.
UMalusi, ewuqonda umnqweno kaRodgers wokuhlala ephantsi, uzama ukuwuthulisa umbhiyozo ePleasant Valley High. Kwi-marquee engaphandle kwesikolo, uRodgers ufumana intlawulo yesibini phantsi kwesaci esikhuthazayo: Ukugqwesa ayisosenzo, kodwa ngumkhwa. Kwaye nangona kunjalo, uRodgers akachazwanga ngegama. Ithi kuphela: Kukho iViking yePV kwiSuper Bowl.
Ootitshala babalisa amabali hayi ngemidlalo kaRodgers kwezemidlalo kodwa ngomlinganiswa wakhe. UJanet Topete, umfundisi-ntsapho weSpanish, waxelela iklasi yakhe ngexesha awagula ngalo ngoxa wayenikela intetho waza waphantse washwabana phantsi. Njengoko wayephuma ngomnyango efuna unyango, uRodgers wamkhupha ngomnyango, wathabatha incwadi katitshala wakhe waza waqhubeka nesifundo de kwafika umntu obambeleyo.
UMalusi wathi: Ndiyazi ukuba ndivakala njengesiqhelo, kodwa andiyazi indlela yokumcebisa ngakumbi kunokuba ndithi njengoko abantwana bam bekhula, ndiyathemba ukuba baneempawu kunye neempawu ezifana noAron.
URodgers akasahlali edolophini, kodwa uhlala enxibelelana ngokusondeleyo aze abuye rhoqo. Uhlala engumntu othandekayo, kwaye iinkokeli zedolophu zicwangcisa i-parade ngembeko yakhe, iphumelele okanye ilahlekelwe. Kwiwebhusayithi yeChamber of Commerce, uRodgers udweliswe kuqala phakathi kwezizathu zeChico zokuzingca, ngaphambi nje kwe-Sierra Nevada brewery.
Kulungile nomenzi webhiya. URodgers ngunozakuzaku ongekho semthethweni, onxibe izikipa zaseSierra Nevada ezijikeleze iGreen Bay kwaye wafumana amatikiti amabini eLambeau Field kwisizini edlulileyo yomphathi wotywala uSteve Dresler.
Ube ngumxhasi omkhulu, omkhulu waseSierra Nevada kunye nomxhasi omkhulu weChico ngokubanzi, uBill Manley, umkhulumeli we-beer-maker, uthe. UAaron Rodgers ubonakala ngathi ngumntu olungileyo. Awukwazi ukukhangela kuye.
Qhagamshelana noDaniel Brown ku dbrown@mercurynews.com .